DOS waa nidaamka qalliinka loo isticmaalo on Personal Kombiyuutarka (kombuyuutar). Waxaa lagu kaydin karaa on diskette laakiin sida caadiga ah waxaa lagu keydiyaa cajaladaha adag, oo way fududahay in la isticmaalo marka on disk adag. Sida dhammaan barnaamijyada kale, qaybaha kala duwan ee DOS waxaa lagu soo gelin RAM iyo gar qaybshay sidii loo baahdo. DOS waa mid ka mid ah nidaamka qalliinka hore ugu badan loo aqoonsan, version ugu commercialized waa in mid ka mid ah Microsoft, christened sida "MS-DOS" sida waxaa jira versions kale sida DR- DOS. MS-DOS waxaa la sameeyey 1981, markii la isticmaalo PC IBM ah.
Shaashada A of bandhigay DOS ah
Oo caan ku Games ku saleysan DOS
Marka MS-DOS soo baxay 1981, waxa ma u eg ah madal rajo fiican u ciyaaraha. Iyadoo mar, gaar ahaan wakhtiga u dhaxeeya 1985-1997, horumarinta sii daayay kun oo kulan ku sifayn kasta PC iyo habab kale oo qalliinka. Haddii aad seegtay Zaman DOS ah, waxaad si sharci ah ka iibsan kartaa ama qaar ka mid ah kulan kuwaas oo sida ay saameyn ayaa weli dareemay in ay taariikhda. Kulamadan oo sida caadiga ah la iman software emulator DOS loo yaqaan DOSBox si ay u ordi karaan daaqadaha casriga ah ama Mac (Macintosh) nidaamka qalliinka.
1.Sid Meir ee Ilbaxnimo (1991)
Kulan dhowr madal kasta oo ay yihiin sidii la qabatimo sida tan; kulan jeedo ku salaysan istaraatijiyad taariikheed oggolaanaysa in ciyaartoyda hanuuniyo horumarinta ilbaxnimada ah. Waxaa Uumiga xukunka horumarka aadanaha ee ciyaar computer pc 3MB IBM.
Iyadoo goobo badan oo gameplay, dhulka guban leeyahay qiimaha celis ku dhawaad ​​koobi karayn. Published by Wendell T. Hicken, dhulka guban ayaa muran la'aan waa mid ka mid ah kulamada xisbiga weynaa abid ee lagu hindisay.
3.X-Guddida: UFO Difaaca (1994)
Kuwii ku caashaqi jiray badan ayaa ciyaarta wac kulankaan ciyaarta ugu fiican ee jeer oo dhan. Waxa ay mideyn ciyaaryahan ka soo horjeeda ciidamada shisheeye soo duulay oo aad ka ciyaari kara kulanka ka badan iyo in ka badan iyagoo aan is caajisaan.
4.Ultima vi: nebigii beenta ahaa (1990)
Tani waa ciyaar kaalintaadii midabo ka fikirka Richard Garriott. In adduunyo, xoolaha meesha ka cidlada, Wabiyaal iyagoo ku badda iyo magaalooyinka waaweyn iyo ciyaaryahan kasta oo Raacay jadwal maalinle ah xitaa marka off shaashadda.
Dhiig u taagan soo baxay mid ka mid ah ciyaarta ugu casri ah oo la qabatimo ee soo mara Dos ah. Waxay ka kooban tahay qof hal nin ka dhanka ah nidaam ah ku waalan iyo ilaahood xun. Ciyaarta ayaa dareensan hufan iyo naqshadeynta ay faahfaahsan oo ay qaab-aragnimo oo wadajir ah oo dhan.
Maxaad Emulator DOS ah?
Tiro ka mid ah dadka waxay jeelyihiin in ay isticmaalaan DOSBox u ciyaaro horyaal ka weyn ee casriga ah hardware PC. Waa maxay faa'iidooyinka DOSBox badan software kale oo casri ah sida VirtualBox?
Fududaato in la isticmaalo. DOSBox ma aha adag sida aysan u leeyihiin arrimaha qaabeynta kasta ama maamulka xasuusta xarfad.
Waxa aanu u baahan image dalwaddii adag drive maadaama ay si toos ah u heli kara diiwaanka oo ciidankii.
DOSBox waa emulator buuxda oo sidaas oo dhan tilmaamaha processor ayaa la hirgeliyo disk adag, iyo waxa maamula karaa hardware kasta.
DOS Box waa emulator DOS in uu isticmaalaa maktabadda SDL ah taas oo ka dhigaysa in ay aad u fududahay in dekedda si dhufto ee kala duwan. Waxaa ordi karaan in dhufto badan oo kala duwan oo ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
9 EMULATORS caanka DOS
DOSBox waa barnaamij emulator in emulates IBM PC computer ah socon socda nidaamka DOS howl ah. Iyadoo emulator this, barnaamijyo asalka DOS waxaa lagu bixiyaa jawi, taas oo ay si sax ah u ordi karaan. Waa mid ka mid ah emulators sare qiimeeyo iyo ordi karaan jir DOS software kombiyuuterada casri ah oo aan doonaynin in si kale u shaqeeyaan.
Badan ayaa kulan la heli karaa
Ordi karaa codsiga wax DOS
Mame waa mid ka mid ah emulators ugu caansan agagaarka. Ahaanshaha ah isha emulator furan, qoraalkii ay diyaar u ah daaqadaha, Mac OS, UNIX, Linux, list iyo xitaa consoles'ka sida Dreamcast iyo sanduuqa X. Mame waa emulator fiican oo dhaleeceyn kaliya waxa ay tahay ma ahan sida fududahay in la isticmaalo sida qaar ka mid ah emulators kale.
UNGR Rating: 15/20
V0.100 3.MAME (DOS 1686 filaayo)
Mame u taagan tahay Multiple Arcade Machine Emulator iyo version this filaayo ee Mame hadda waddaa 1800 oo lagu daray classic (oo xitaa qaar ka mid ah oo aan si classic) Waxaa xitaa waddaa kulan Neo Geo.
Download link: rasmiga Mame Site
NeoRage (x) ay maamushaa labada MS-DOS iyo Windows. Waxa faa'iido u noqonaya in ay isku dayi doonaan in ay sii wadaan ciyaarta wax socon kara kaalinta aad ROM. Iyadoo emulator this, filenames ay u baahan tahay ma noqon mid dhamaystiran oo sax ah taas oo ka dhigaysa waa arrin sahlan loo helo kulan sida romsets oo dhan ma aha 100% sax ah ay maamulaan.
Emulator Tani waxay maamushaa labada MS Dos iyo madal Windows. Wax macno ah ma ordi MVs ROMS Arcade, kaliya dhab ah NeoGeo CD EE si toos ah uga ROM drive cd. Its waafaqsan yahay fiican fala la jaanqaadaan kulan ee ugu sax ah. The version DOS qoreysa interface wanaagsan iyo dukumentiyada laakiin sida ay tahay barnaamij DOS ku salaysan, dhawaaqa ma aha mid aad u wanaagsan. Sidoo kale version DOS ah lama jaanqaadi Windows XP.
NeoGem waa emulator MS Dos ah in loo soo sameeyay wax yar kadib markii NeoRage, oo waxay bixisaa taageero dhawaaqa xadidan. Si kastaba ha ahaatee waxa aan ahaa mid aad u socon oo ahaa nugul shilalka sidaa darteed caqabadaha alaabta la joojiyey ay tahay.
Boxer waa emulator ah in ciyaara oo dhan kulan MS Dos aad Mac. Waxaa jira qaabeynta ma loo baahan yahay; oo aad u baahan tahay inaad samayso waa jiidi -drop kulan aad u gal Boxer oo aad la iyaga ka ciyaari doona daqiiqo. Waxay u baahan tahay Mac OS X 10.5 ama wax ka sareeya.
Danji muuqday qiyaastii waqti isku mid sida NeoGem oo sidaas oo kale waddaa in MS Dos. Waxaa lagu gartaa taageero dhawaaqa xadidan, waafaqid hoose iyo u baahan tahay diinta ka hor inta of ROM ciyaarta qaab ka duwan ka hor ciyaaro.
Depam waa emulator kale cd NeoGeo in ay xadidan tahay sifooyinka iyo la sii daayay oo kaliya sida imtixaan tijaabo ah. Waxa aan la updated tan.
> Resource > Emulator > Top 9 DOS Emulators - Play DOS Games On Qalabka Kale